Buy Star City Condo Rent (ID-684) (16Lks) in သန်လျင် on ipivi.com
Star City Condo Rent (ID-684)
1260 sqft star city condo for rent in Thanlyin Township, near Bago River. Condo has Living-room, One Master Bed-room, Two Single Bed-rooms, Dinning, Kitchen and Bath-rooms. Fully furnished condo.
Monthly Rent Price - 1200 USD (Nego)
သန်လျင်မြို့နယ်၊ ပဲခူးမြစ်အနီး ငှားရန်ရှိသော ၁၂၆၀စတုရန်းပေအကျယ်ရှိသောStar City ကွန်ဒိုအိမ်ခန်းဖြစ်ပါသည်။ ကွန်ဒိုအိမ်ခန်းအတွင်း ဧည့်ခန်း၊ အိပ်ခန်းကျယ် တစ်ခန်း၊ အိပ်ခန်းငယ်နှစ်ခန်း၊ ထမင်းစားခန်း၊ မီးဖိုချောင်နှင့် ရေချိုးခန်းများဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားပါသည်။ ပရိဘောဂအသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများ အသင့်ထည့်သွင်းပါရှိပါသည်။
ကွန်ဒိုအိမ်ခန်း၏လစဉ်ငှားရမ်းခမှာ - ဒေါ်လာ ၁၂၀၀ (ညှိနှိုင်း) ဖြစ်ပါသည်။
ငှားရန်Star City ကွန်ဒို (ID-684)
အမည်: Star City Condo Rent (ID-684)